About Us - ugaadh (xeebaha geeska Afrika) Technology Co., Ltd.
Ugaadh (xeebaha geeska Afrika) Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay sannadkii 2001. Waxaan nahay soo saaraha ah iyo alaab-of tiro balaadhan oo ah kaydinta warshadaha iyo ganacsiga xirtey nidaamyada iyo qalabka taabato qalab.
Waxaan ku takhasusay tashiga, design, iyo rakibidda xal xirtey iyo kaydinta wax ku ool ah; siiya qalabka kala duwan ee qalabka la xalinaayo in qaybaha kala duwan ee warshadaha iyo ganacsiga iyo sidoo kale hay'adaha gaarka ah & dadweynaha adduunka oo dhan.
Waxaan u isticmaali qalab tayo sare leh oo ay bixiyaan Shanghai Baosteel Group (warshada ugu weyn ee steel ee Shiinaha). Waxaan leenahay auto line rinjiyeynta budada electrostatic sare iyo 2 hababka nadiifinta-daaweyn pre.
At ugaadh, waxaanu u rumayn keeno alaabta iyo qalabka dammaanad heerka ugu sareeya ee tayada waafaqsan heerarka warshadaha. Waxaanu sidoo kale aaminsanahay in iibka kasta oo mashruuca, iyadoo aan loo eegin size ama qiimaha, waxay mudan yihiin taageero our total ka qorshaynta ilaa adeeg heer sare ah ka dib-iibka our.
Si aad u adeega fiican macaamiisheena, waxaan ku adkayn pre-iibinta iyo adeegga-iib aheyn ka dib iyo ka sameeyey dadaal si ay u siiyaan macaamiisha ay la fiican, waqtiga iyo adeegyada farsamo mustaqbalka-oriented. Ugaadh ka raalli gelin baahiyaha kala duwan ee macaamiisha our, wanaajiyo qancinta macaamiisha, dhiso muddo dheer xiriirka lamaanahaaga guul-guul aad la!
Our falsafada waa inuu kaa caawiyo inaad si si buuxda loogu isticmaalo meel bakhaar, uuga isticmaalka ogolaanshaha database, karti dheeraad kaydinta bakhaarka. Waxaan sidoo kale loo yareeyo kharashka, inch kasta oo dime kastana waa la filaayo in at danbeeyay Products.
Warehouse sariirtaada hayayaashii , sariirtaada xirtey ilaaliyaan , Warehouse sariirtaada xirtey System , candho- Wire mesh Weelka , Warehouse Kaydinta hayayaasha , sariirtaada xirtey kor ,